Jonga eMilan ngosuku - Iindawo ezibalulekileyo zokundwendwela | Ukuhamba kwe-Absolut
Yintoni ongayibona eMilan ngosuku olunye
USusana godoy | | UMilan
Asisoloko sinemihla emininzi yeholide. Ke ukuba sifuna ukuba nohambo oluhle kwaye singaphoswa naziphi na iinkcukacha, kuya kufuneka senze utyelelo olubalulekileyo. Ngaba unayo ixesha elincinci kwaye ufuna ukonwabela le ndawo? Ewe ungaphoswa yiyo yonke into onokuyenza jonga eMilan ngosuku olunye.
Kungenxa yokuba ineminyaka emininzi yembali, enezakhiwo ezikhulu kunye ne ilifa lemveli lobugcisa esingamele siyilibale. Sinezinto ezininzi esinokuzibona eMilan ngosuku olunye, kodwa sigxila kwezona zibalulekileyo, ukuze uzonwabele zonke. Ngaba ululungele uhambo lwakho olukhulu?
1 UPiazza del Duomo kunye neMilan Cathedral
2 Inqaba yaseSforzesco
3 Iimbaleki uVictorio Emmanuelle II
4 I-Basilica yaseSaint Ambrose
5 Yintoni ongayibona eMilan ngosuku olunye, iScala Theatre
6 USanta Maria delle Grazie
7 UPiazza Mercanti
UPiazza del Duomo kunye neMilan Cathedral
Siqala ukhenketho kwisikwere esikhulu saseMilan. Inemilo yoxande kwaye kuyo sifumana amanye amanqaku aphambili. Umzekelo, nge Icawa yaseMilan, YeCawa yamaGoth, ithathwa njengeyona inkulu ehlabathini. Ukwakhiwa kwaqala ngo-1386 kwaza kwagqitywa ngo-1965. Ngaphandle kwamathandabuzo, yenye yeengongoma eziphambili ubuhle bazo phantse bungachazekiyo. Zombini ngaphandle nangaphakathi, kuba apha siza kufumana imifanekiso eqingqiweyo kunye neetafile kunye namatye ezikhumbuzo. Ukubuyela kwisikwere, kuya kufuneka sifumane iRoyal Palace kunye neVictor Manuel II Gallery, esiza kuthetha ngayo apha ngezantsi. Ngaphandle kokulibala iPalazzo Carminati, iPalazzo Reale okanye iSikhumbuzo sikaKumkani uVictor Emmanuel II.
Ungayifumana kwidolophu yakudala. Le yenye yeendlela ezibalulekileyo onokuzibona eMilan ngosuku olunye. Okwangoku inemyuziyam yobugcisa ngaphakathi. Ulwakhiwo luqale ngenkulungwane ye-2012, ngesicwangciso sesikwere kunye neenqaba ezine. Kule minyaka ezinye iimfihlo ziye zafunyanwa ngaphakathi. Ukusukela ngo-2013 xa imizobo yeCaravaggio yavela kwaye ngo-XNUMX Imizobo ebalulekileyo engapapashwa nguLeonardo Da Vinci.
Iimbaleki uVictorio Emmanuelle II
Kwindawo esemantla yePiazza del Duomo sifumana ezi galari. Isakhiwo esineeglasi zeglasi kwaye senziwe ngo-1861. Ngaphandle kwamathandabuzo, ubuhle buhlala kuso kwakhona kwaye ngenxa yesi sizathu, yenye yezona ngongoma zibalulekileyo ekufuneka sizindwendwele. Apho uya kudibana iivenkile ezininzi ukuze ukwazi ukuzinyanga kwaye umise kakuhle kuhambo lwakho. Imigangatho emine iyonke apho uya kufumana iivenkile zokutyela, ubucwebe okanye iivenkile zencwadi, phakathi kwabanye.
I-Basilica yaseSaint Ambrose
Sijongene nenye yeecawa ezindala eMilan, kuba yakhiwa phakathi kwe-379 kunye ne-386. Nangona kuyinyani ukuba kule minyaka idlulileyo kunye neenkulungwane, iye yaguqulwa. Sele inkulungwane yesithoba ngu UBhishophu Angiberto ngubani owongeze i-apse kunye ne-barrel vault. Inyani yile yokuba izinto zokwakha zalo zisisiseko njengezitena ezinemibala, ilitye okanye udaka. Inkqubo ye- iimonki intsimbi Kususela kwinkulungwane ye-XNUMX kwaye ezomgaqo zivela kwi-XNUMX.
Yintoni ongayibona eMilan ngosuku olunye, iScala Theatre
Emva kwegalari yeVicttorio Emmanuelle, siza kugxila kwi I-Scala Theatre. Ivela kwinkulungwane ye-XNUMX kwaye yenye yezona zaziwayo kwihlabathi. Kuba igubungele iimvumi ezinkulu zeengoma. Ngapha koko, kuthiwa amagcisa abalulekileyo anjengoMaría Callas noPlácido Domingo ayenzile. Njengomdla, yonke imisebenzi eyenzeka kwindawo yemidlalo yeqonga iya kuphela ngaphambi kokuba kufike ezinzulwini zobusuku. Ke ezinye ezinde kuya kufuneka ziqale kwangoko.
USanta Maria delle Grazie
Kananjalo asinakuphuthelwa yilecawa nakwikhaya loonongendi. Kwakukho ngenkulungwane ye-80 xa ulwakhiwo lwayo lwaqala kwaye ewe, yeyona nto yaziwayo siyabulela kwizinto ezihlala ngaphakathi. Ukusukela apha kuqokelelwa eludongeni olukhulu lweSidlo Sokugqibela. Umsebenzi owenziwe nguLeonardo Da Vinci, njengoko sisazi kakuhle. Kule nto kunye nokunye okuninzi, kwii-XNUMXs yabhengezwa njenge Ilifa lehlabathi. Ewe, ukuba ufuna ukuyibona kumntu wokuqala, kungcono wenze ugcino lotyelelo, kuba ihlala iyindawo enabantu abaninzi.
Ngexesha lamaXesha Aphakathi yayiliziko lobomi kwaye kwiinkulungwane kamva ihlala yenye yezona ndawo ziphambili eMilan. Ke ukuhamba kwindawo enje kuya kusenza sigqibe usuku eMilan. Kuyinyani ukuba siza kuba nezinto ezininzi zokuzibona, kodwa iiyure ezingama-24, sizithatha kakuhle. Ukubuyela kule ndawo, siza kufumanisa ukuba Ibhotwe leRagionengokunjalo ILoggia Degli Osii. Esokuqala sisakhiwo esimile ngokungathi sisikwere esigutyungelweyo, esinee-naves kunye neeporticoes. Le yokugqibela ikwalibhotwe elisondele kakhulu kwiCathedral. Apha siza kubona iSchuole Palatine kunye neNdlu yePanigarola. Ngoku uyazi ukuba uza kubona ntoni eMilan ngosuku olunye!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Yintoni ongayibona eMilan ngosuku olunye
Iingingqi zaseSan José